० अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेरिरहनु भइको छ ?
— अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई मैले सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु । किनभने कुनै पनि सरकारको निर्माण पश्चात तुरून्तै त्यो सरकारको बारेमा टिप्पणी गरिहाल्नु हुँदैन । जुन ढंगबाट सरकारको गठन भएको छ केही हदसम्म मैले सकारात्मक लिएको हुनाले यसको बारेमा अहिले नै केही टिप्पणी गर्न चाहन्न ।
० समग्रमा भन्नुपर्दा मधेशको राजनीति कता जादैछ ?
— मधेशको राजनीतिको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने जुन ढंगले मधेशी शक्तिहरूले सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छन् त्यो भनेको सरकारमा सहभागिताका लागि नै हो जस्तो लाग्छ । एक किसिमले उनीहरूको भित्री इच्छा पनि यहि रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा मलाई के लाग्छ भने मधेशको राजनीति त्यति राम्रो ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छैन । मधेशबाट अहिले जितेर गएका मधेशवादी दलमात्र होइन ति बाहेक पनि अन्य शक्तिहरू छन् । विभिन्न ढंग र रूपमा आफूलाई एउटा शक्तिको स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । समग्र रूपमा भन्नुपर्दा मधेशको राजनीति सही दिशामा गइरहेको मैले अनुभूति गरिरहेको छैन ।
० अहिलेको मधेशको अवस्था कस्तो छ ?
— मधेशी जनताले ठूलो आहुति दिए पनि मधेशमा मधेशीहरूले अपेक्षाकृत सिट प्राप्त गर्न सकेनन् । यद्यपी प्रदेश २ मा सरकार त बनाएका छन् । यस अर्थमा मधेशी दलहरूले आफूलाई सफल नै ठानेका होलान् । प्रदेश २ मा मधेशी दलले सरकार सरकार बनाउँदैमा उनीहरू सफल छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । यसमा मधेशीहरूको असन्तुष्टि छ । जुन उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मधेशीले आफ्नो ज्यान दिएका छन्, त्यो उद्देश्य प्राप्त नभए सम्म जितेका शक्तिहरूले सरकारसँग वार्ता गरेर या लेनदेन गरेर सरकारमा जान चाहन्छ भने त्यो मधेशको लागि प्रतिस्पर्धी हुनेछ ।
० मधेशको मत लिएर संसदमा गएका मधेशवादी दलहरूसँग मधेशका जनता सन्तुष्ट छन् या छैनन् ?
— जसले आफ्नो हक र अधिकारका लागि आहुती दिएका छन् तिनै मधेशका जनता हुन् । जुन उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि आहुती दिएका छन् त्यो उद्देश्य प्राप्त नभएसम्म सरकारमा जान्छ भने स्वभाविकै रूपमा मधेशी जनता सन्तुष्ट हुँदैनन् । समग्रमा भन्ने हो भने त जनता त असन्तुष्ट नै छ । मधेशी दलले मधेशी जनताको मत पाएका छन् तर ती दलहरूले जनताको अपेक्षा, भावना अनुसार अहिले संसदमा काम गरिदिनुपर्दछ । मधेशी जनताको हक अधिकारको लागि काम गर्न सकेनन् भने उनीहरूसँग मधेशी जनता कसरी खुशी होलान् र ?
० यस्तो अवस्थामा मधेशमा वैकल्पिक शक्तिको खोजी हुँदैछ ?
— हो । वैकल्पिक शक्तिको खोजी हुँदैछ ।
० कस्ता किसिमका वैकल्पिक शक्तिको खोजी हुँदैछ ?
— मधेशमा मात्र होइन, पहाडमा पनि वैकल्पिक शक्तिको खोजी हुँदैछ । किनभने यो परम्परागत राजनीतिक प्रणालीबाट नेपाली जनता आजित भइसकेका छन् । जुन राजनीति पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म एकैनासले शासन गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय जस्तो गरिमामय स्थानमा समेत चरम राजनीतिकरण भइरहेको छ । विश्वविद्यालयको हरेक तहमा दलहरूले नै घेरेको हुन्छ । शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा यस्तो भएपछि देशको भविष्य कता जान्छ । शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा यस्तो अवस्था छ । त्यसकारण यो परम्परागत राजनीतिबाट देश चल्नेबाला छैन । परम्परागत राजनीतिबाट देश चलाउन खोज्छ भने यो देशको सचेत नागरिकले वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा निस्कन्छ र यहाँ वैकल्पिक शक्ति केही समय पछि निस्कन्छ ।
० अहिले नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल के गर्दैछ ?
— मूलतः नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले अहिले आफ्नो वैचारिक पक्षलाई स्पष्ट रूपमा जनतासमक्ष राख्दैछ । जनतालाई सम्झाउँदै छ कि नयाँ शक्ति पार्टी के हो र यसको वैचारिक धारणा के हो । किनभने जबसम्म वैचारिक राजनीतिक अवधारणा प्रष्ट हुँदैन, जबसम्म हामी जनतालाई मन मष्तिष्कमा राख्न सक्दैनौँ र संरचनात्मक संरचना पनि निर्माण हुन सक्दैन । त्यसकारण नयाँ शक्ति नेपालले अहिले वैकल्पिक शक्ति के हो, नयाँ शक्ति पार्टी भनेको के हो, यसले नेपालमा के गर्छ, एमाले, माओवादी, कांग्रेसभन्दा यो किन भिन्न छ भन्ने कुरा नेपाली जनतामा हामी स्थापित गर्दैछौँ । यो काम हामीले केही महिना पश्चात नै स्थापित गरिसक्छौँ । यसको साथसाथै संगठनात्मक संरचना पनि निर्माण गर्दैछौँ । हामीले एक वर्ष भित्रमा नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसकारण अहिले नयाँ शक्ति पार्टी आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा परिचित गराउने पक्षमा लागिरहेको छ । अहिले एमाले–माओवादीको सरकारलाई मधेशवादी दलहरूले पनि समर्थन गरेको छ । त्यसकारण पनि अहिलेको सरकारले दुईतिहाई मत प्राप्त गरी हामी शक्तिशाली भयौँ भन्ने सोचाई राखेको छ । तर हामी के भन्दैछौँ भने नयाँ शक्ति पार्टी राष्ट्रिय पार्टी होस् या नहोस् तर हाम्रो अध्यक्षज्यू संघीय संसदमा रहनुभएको छ । यदि उहाँले राम्रो भूमिका खेल्नुभयो भने कांग्रेसभन्दा पनि बढी विपक्षमा हामी उभिन सक्छौँ । उहाँले यो भूमिका खेल्न पनि सक्नुपर्छ किनभने नेपाली कांग्रेसले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । किनभने नेपाली कांग्रेस पनि परम्परागत राजनीतिककै एउटा रूप हो । नयाँ शक्ति पार्टी संसदमा एउटै सिट भए पनि विपक्षी दलको भूमिकामा हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
० नयाँ शक्ति पार्टीमा पहिलेको जस्तो आकर्षण अहिले हराउँदै गएको महशुस गर्नुहुन्छ ?
— हो, यो कुराको त मैले पनि महशुस गरिरहेको छु । सहि कुरा भन्न मलाई कुनै गाह्रो हुँदैन । जुन समय रातारात एउटा इतिहास लेखेको नयाँ शक्ति पार्टी अहिले त्यसमा कम आएको छ ।
० यस्तो हुनुको कारण के होला ?
— यसका कारणहरू पनि धेरै छन् । तपाईं जब नयाँ सोच, विचारलाई आत्मसात गर्नुहुन्छ, त्यसमा उतार चढाव भइरहन्छ । नयाँ कुरालाई स्थापित गर्न समय त लागि नै हाल्छ । २०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरू गर्दा माओवादीमा कति जाना थिए र, तर अहिले माओवादी देशको दोस्रो ठूलो पार्टी बनेको छ । मधेशमा सद्भावना पार्टी हुँदा मधेश शब्द राख्नलाई नै कति संघर्ष गर्नु परेको थियो तर आज हरेक क्षेत्रमा मधेश शब्द आइरहेको छ । जुन समयमा सद्भावना पार्टी मधेशी शक्तिको रूपमा थिए आज देशकै शक्तिको रूपमा स्थापना भएको छ । नयाँ शक्ति पार्टीमा पनि पहिले जुन किसिमको आकर्षण थियो त्यो अहिले कम भएको छ यसमा कुनै दुइमत छैन । तर नयाँ शक्ति पार्टी परम्परागत राजनीतिको विरोधमा छ । यो पार्टी नयाँ सोचका साथ आएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा यो सोचलाई हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ भने देश नयाँपनबाट विश्वमा परिचित हुन सक्छ ।
० निर्वाचनमा पनि नयाँ शक्तिले खासै सफलता हासिल गर्न सकेन र प्रभावशाली नेताहरू पनि पलायन हुँदै छन् यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
— छोटो समयमा नै नयाँ शक्ति पार्टी यहाँसम्म आइपुग्नु भनेको आफैमा उपलब्धीपूर्ण काम हो । ५० वटा पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिएको मध्ये १३ वटा पार्टीले मात्र अहिले संसद र प्रदेश सभामा सिट पाए । त्यसमध्ये पनि २ वर्ष पहिला मात्र खुलेको पार्टी ७ औँ स्थान हुनु भनेको आफैमा उपलब्धीपूर्ण काम हो । अब तपाई आफै भन्नुहोस् कि प्रभावशाली नेता भनेको को हो ? जो आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ती गर्न मात्र नयाँ शक्तिमा आएका थिए र स्वार्थ पूरा गर्न नसक्दा जहाँबाट आएको हो त्यही गए । के त्यस्ता नेतालाई प्रभावशाली भनन मिल्छ ? हामीलाई अहिले नै सरकारमा जान कुनै हतार छैन । हामी पहिले आफ्नो स्थान मात्र स्थापित गर्न चाहन्छौँ ।
० प्रतिनिधि सभामा एउटा मात्र सिट रहेको नयाँ शक्ति पार्टीले संविधान संशोधनमा कस्तो भूमिका खेल्छ ?
— मधेशी, आदिवासी, जनजातिको लागि संविधान संशोधनको मागको हामीले जुन बुँदा राखेका छौँ, त्यसमा हाम्रो पूर्ण सहमत नै छ । मधेशी दलहरूको पक्षमा हुबहु नलागे पनि जब मधेशी जनताको हक अधिकारको बारेमा विधेयक संसदमा पेश हुन्छ त्यसमा नयाँ शक्ति पार्टीको पूर्ण सहमती हुनेछ, यसमा कुनै दुईमत छैन ।